This fantastic slot is one of the most popular free online casino games. na 5 reels and 243 ụzọ iji merie o nwere pụtara na otutu ndịna-emeputa na kemgwucha na-akpali gameplay. The isiokwu dabeere na Electric Sam na ezinụlọ ya ụtọ na Caribbean n'ụsọ osimiri. Jikọọ ha fun na i nwere ike imeri ọtụtụ nke ụgwọ ọrụ kwa.
Banyere Ndị Mmepe nke Sam On The Beach Ohere mepere
Elk nka bu Mmepụta nke a mara mma ma na nnọọ otutu oghere egwuregwu. Ọ bụ ezie na nke a Mmepụta bụ ọhụrụ na-azụ ahịa ma ha masịrị onye ọ bụla na ha ịtụnanya egwuregwu na pụtara ndịna. They have worked for lots of free online casino games providers and also some very big casinos.
Nke a oghere nwere 5 reels and 243 ụzọ iji merie ya mere na ị gaghị ahapụ a oghere na-enweghị na-emeri ihe. The ndịna doro nnọọ anya. Na akara na-mara mma mere. Osimiri ma na-acha anụnụ anụnụ oké osimiri na ndabere ga-eme ka ị chọrọ ịga n'akụkụ osimiri. This game is available to be played on various online casinos as one of the free online casino games. The elu na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya ndị Sam ezinụlọ gụnyere nwunye Sandra, nwa-ya nwayi Maggie na nwanne ya nwoke Ted. Lower uru na akara na-agụnye nshịkọ, seahorse, azuokpo. E nwere ọtụtụ bonus atụmatụ dị ka ndị Beach Memorial atụ ogho- A mma na-triggered mgbe ị na adaa niile anọ ndị òtù ezinụlọ na otu akara. Ị ga-utịp na free spins na niile ndị òtù ezinụlọ ga-ghọọ osisi wilds ihe ndị ọzọ na free spins.
The ikposa akara bụ ọlaedo mgbịrịgba na yiri mgbaaka oge ọ bụla ọ ala na ukwu. Ọ bụrụ na ị na adaa 3,4 ma ọ bụ 5 ndị a hey, ị ga-enweta 5, 10 ma ọ bụ 15 free spins. Ọ bụla ọzọ bọọlụ na adaa na gị ukwu n'oge Free atụ ogho Feature ga-enye gị ọzọ free atụ ogho.
Ọzọkwa ma ọ bụrụ bụla nke na ndị òtù ezinụlọ ala n'oge Free atụ ogho Njirimara ha na-enye gị electric emeso dị ka Sam si Electric emeso bụ na ọ bụrụ na ọ ala n'oge feature, ọ ga-ahụ nke nnyapade ọhịa. Sandra si emeso bụ na ọ ga-amụba ba uba ruo 10x. Ọ bụrụ na Ted ala n'oge feature ọ na-enye gị 2x ma ọ bụ 3X multipliers. Ọ bụrụ na Maggie ala na ukwu ọ kwagaa pụọ ​​ala uru na akara na ọhụrụ akara egosi.
Nzọ opekempe àmà site 20p ka £ 100.
Nke a egwuregwu site na elk nka ga itu n'anya gị. Ọ nwere ihe nile na onye na-atụ anya nke ihe online oghere egwuregwu: oké ndịna, eji ire ụtọ gameplay, ịtụnanya atụmatụ na a elu payout. To add to this the slot is available amongst various free online casino games at various online casinos. Ya mere ị pụrụ ọbụna egwu ya n'ihi na free!